Miteny izay sendra ny vavany ?
Ho tendrena ho haingo-bato amin’ity “zava-baovao” ity ny mpanohitra ao anatin’ny ankolafy telo, ny sehatra iraisam-pirenena, ny ray aman-dreny isam-paritra, ny ffkm, ny firaisa-monim-pirenena, hoy izy nanazava satria tsy hahazo ny faneken’izao tontolo izao mihitsy isika, ary ho voakina hatrany ho “mandeha ila” ny fifidianana izay ho karakaraina ato ho ato. Dia voasoratra sy nifanarahana av ytaiza indray izany hevitra izany? Ny efa voatsangana mifandrafy sy tsy laitra amin’ny ady hevitra tsy mamokatra, dia mbola hanangana rafitra tsy fantatra akory indray ny andraikiny sy ny anton’ny hanaganana azy? Misy an’izany ve “ny tondrozotra tsy azo ovana” sy “ny lalampanorenana voafidim-bahoaka”?
Auteur Ony RambeloPublié le 5 juillet 2011 5 juillet 2011 Catégories Malagasy, Politique
1 réflexion sur « Filohan’ny CST Rasolosoa Dolin »
Ny olana misy dia ny FIBODOANA ilay toerana nefa hita fa tsy ho vita!bahanana fotsiny izao izay mba
Précédent Article précédent : Nokasaina afenina i Andry Rajoelina dia lazaina fa voasambotra , paika maloto handotoana an’i Dada ?
Suivant Article suivant : Asehoy ny Hambontsika sy ny Fahedrentsika !